Khilaafka labada Aqal ee Baarlamaanka oo sii xoogeystay | Keydmedia
Khilaafka labada Aqal ee Baarlamaanka oo sii xoogeystay
Cabdi Xaashi ayaa u muuqda inuu kahor imaanayo qorshaha mudo korarsiga Farmaajo, isagoo diiday sharciyo dhawaan uu meel-mariyay Gollaha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afhayeenka Aqalka Sare Cabdi Xaashi, ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aan uu qaatey gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal, oo xeerka matelaadda gobolka Banaadir ugu bedelayo "Qaraar", si uusan u tagin Senate-ka.
Gudoonka labada aqalka ee BFS ayaa khilaafkooda gaarey meeshii ugu sareysay kadib markii dhawaan Xildhibaanada Aqalka Hoose ay ansxiyeen 4 qodob oo wax ka bedel loogu sameeyay sharciga doorashooyinka, sida asteynta degaan doorashooyinka, qoondada haweenka, kuraasta Somaliland iyo metalaadda gobolka Banaadir.
Aqalka Sare oo matela Maamul Goboleedyada ayaa ugu baaqey Gudiga Doorashooyinka inuusan isticmaalin qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay ee doorashadda, maadaama aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee ka shaqeeyay gudiga wadajir ee dib u eegista xeerka doorashadda.
Gobolka Banaadir ayaa loo qoondeeyay 13 kursi inuu ku yeesho Aqalka Sare ee lasoo dhisi doono, waxaana in Gollaha Shacabka meel-mariyo ka dalbaday Farmaajo si uu ugu soo galo doorashadda. Laakiin Aqalka Sare ayaa kahor yimid qorshihisa, maadaama uu hareermarsan yahay Dastuurka dalka.
Cabdi Xaashi wuxuu sheegay in ay waxba-kama-jiraan yihiin afarta xeer ee qabyo-tirka sharciga doorashooyinka, maadaama aan la waafijin habraaca xeer dejinta dalka.
Farmaajo ayaa la sheegay inuu la safan yahay Mursal, maadaama uu ka shaqeynayo dantiisa, waxaana labadooda ku heshiiyaan in howlgab laga dhigo Aqalka Sare, oo mudadii uu jiray la hareer-mariyay dhowr xeer oo Gollaha Shacabka kasoo gudbay, kuwaasoo u badnaayeen misaaniyada dalka.
Xogta Keydmedia Online heshay ayaa sheegaysa in Madaxtooyada ay rabto in Doorashada uu go’aan ka gaaro Aqalka Hoose, oo kaliya ay ku riixday guddoomiye |Mursal iyo ku xigeenkiis Muudey in ay khilaaf kala hor yimaadaan Afhayeenka Aqalka Sare Cabdi Xaashi.